FIFIDIANANA : Nanampy tosika ara-bola an’i Madagasikara i Grande Bretagne
Amin’ny ankapobeny dia milamina ary efa mandeha araka ny tokony ho izy avokoa ny fikarakarana ireo pitsopitsony rehetra hoenti-miatrika ny fifidianana amin’ity taona ity. 26 septembre 2018
Mbola misy ihany anefa ireo ezaka ilaina fampiasam-bola ho amin’izay fiatrehan’i Madagasikara ny fifidianana izay, indrindra ho amin’ny fihodinana faharoa.
Tahaka ireo firenen-dehibe nanamafy ny fifanaraham-piara-miasa amin’i Madagasikara ho amin’ny fiatrehana sy fanomanana ny fifidianana dia nitondra ny anjara birikiny ihany koa i Grande Bretagne tamin’ ny alalan’ny masoivohony miasa sy monina eto amintsika.
Tontosa, omaly teny amin’ny foiben-toeran’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Céni) etsy Alarobia ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny roa tonta. Ity firenena ity dia anisany hanampy tosika ara-bola an’i Madagasikara ao anatin’ izao fikarakarana ny fifidianana izao. Ny fanampiana izay natolony dia hamenoana ny banga ao anatin’ny kitapom-bola natokana ho an’ny tantsoroka hoenti-manomana ny fifidianana na “Sacem”.
Nanamafy ny solontenan’i Grande Bretagne izay tonga tetsy Alarobia omaly fa “tsy hanohana sady tsy hanosika kandidà velively izy ireo ao anatin’ity fifidianana ity”. Nohamafisiny hatrany fa kihon-dalana lehibe lalovan’ny firenena malagasy izao fifidianana izao, ka tokony ho ao anatin’ny fangaraharana tanteraka no hanatanterahana izany. Hatreto dia firenen-dehibe maro no efa nampiseho ary nanamafy ny fahavononany amin’ny fanampiana an’i Madagasikara amin’izao fiatrehana ny fifidianana izao.
Nohamafisin’ny solontenan’izy ireo hatrany ny tsy fiandaniany amina kandidà iray saingy kosa mangataka ny hanatanterahana ny fifidianana ao anatin’ny filaminana ary mba hoeken’ny rehetra izay vokatra miseho eo. Nandritra io fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa, omaly io dia nanambara ny solontenan’i Grande Bretagne fa tokony ho anisan’ireo firenena ho lasa lavitra i Madagasikara. Manana anjara andraikitra goavana amin’izany, hoy izy, izay Filoham-pirenena lany eo amin’ny famoahana ny vahoaka Malagasy ao anatin’izao fahantrana lalina izao. Miroso lalina hatrany ny fanomanana ny fifidianana. Nambaran’ny filohan’ny Céni fa izay vola ao anatin’ny kitapom-bolan’ny tetikasa Sacem miaraka amin’ny volam-panjakana no hoentin’izy ireo miatrika sy manomana ny fifidianana hatreto.